Cargo Manager | Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd ﻿
24.8.2019, Full time , Automotive
(တန်ဆာ မန်နေဂျာ - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်း)
For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၃၀ - ၄၀ ကြားဖြစ်ရမည်။
•	စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၄) နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ကွန်ပျူတာ Word , Excel ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location အခန်းအမှတ် ဋ A5/6 ၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်း။
D-4 , Dagon Road , Aung Mingalar Bus Station
•	အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု့ ကောင်းမွန်ရပါမယ်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
•	Must be able to communicate with all levels of users from top management to ends. Users very patiently at every situation and handle all problems, complaints well.
•	Assisting Customer in finding the appropriate parts for their vehicle. •	To attend and provide customer service for enquiries on spare parts requirements, availability of stock and pricing. •	To report & propose for ordering parts if some parts is shortage or less qty in stock. •	Prepare ordering monthly from time to time upon request and acquired necessary approval. •	Prepare Daily Sales Report and then prepare Monthly Sales Report.
•	မော်တော်ယာဉ်များအား သတ်မှတ်ကီလိုမီတာအလိုက် ယာဉ်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် စာရင်းပြုစုခြင်း •	မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ အသုံးပစ္စည်းများ၊ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံး ပ� ...
106 Days, Full time , Automotive
•	Haveagood sales track record For FHL Express Services Provider
•	Customer Service လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
Cargo On Paper
•	တန်ဆာအပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ (တန်ဆာလက်ရေး စာရေး) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (တန်ဆာတာဝန်ခံ) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ For FHL Express Services Provider
Assistant Gate Supervisor
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (လက်ထောက်ဂိတ်မှူး - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (ဂိတ်မှူး -မိတ္တီလာ) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (ဂိတ်မှူး - အောင်ဆန်းကွင်) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
108 Days, Full time , Automotive
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ (တန်ဆာ မန်နေဂျာ - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်း) For Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
•	Admin Manager အားတာဝန်ခံပြီး၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ကြီးကြပ် ၀ယ်ယူရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်၊ •	လစဉ် ရုံးချုပ်မှ တောင်းခံသော စာရေးကိရိယာနှင့် အခြားအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းမ� ...
Cargo Manager Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Automotive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8711)
Pyi Sone Win Aung Co., Ltd.
Warehouse Technician (For East Dagon)
Assistant Manager (Field Marketing)
Myanmar General Motor Co.,Ltd
Myanmar Motor Corporation Co., Ltd
F&B Manager-Best Western Chinatown Hotel (Yangon)
Area Sales Manager (Vsmart Phone)